Ngithemba ukuthi ukuze kukhululwe olulandelayo kukho parser.php izoba okulungisekayo in the izilungiselelo plugin ngakho akudingeki redo lapho ngcono. Lezo yilezi amathuba amaningi!
Not konke kuyoba okulungisekayo, njengoba thina abafuni ukuba kuvelele ngumsebenzisi izinto eziningi kakhulu, Godu – ngalokhu amaphuzu lokhu kugcina lesi sici kubasebenzisi eliphezulu kakhulu cishe uqonde kangcono ukuthi yini okumele uyilindele uma ukulindela futhi, futhi Angazi bazizwa kuyinto ovuthiwe ngokwanele ukuba abe ingxenye engumongo main, okungenani hhayi okwamanje.
siyabonga amazwana Nokho
Ngiyakubona ukuthi okukhethwa kukho kungenzeka kube ovuthiwe ngokwanele ukwengeza ku-ukucushwa (Nakuba siye uyabona ongakhetha ukucushwa in software eziveziwe njengoba “beta” noma “lokuhlola”, njll. – ngakho ayikho isibonelo – Ngisho nangezikhathi Transposh kakade) Njengoba ukuba engafuni “amandla” umsebenzisi, nabo bonke ngenhlonipho efanele, Angazi ukuthenga leso ingxabano software ukumisa. Eqinisweni, Angikwazi ukusho ukuthi ngathola ongakhetha Transposh sika njengoba benjalo 100% ezisobala. Lokho akungikhathazi. I nje ukuchitha isikhathi re-ukufundwa ngize ngiqonde. Ngiyazi ukuthi kukhona umbono othandwayo in software kuningi udinga ukuba “uyigcine elula”, kodwa kuvumelana nezimo of umsebenzi iya ngesandla in-hand nge yinkimbinkimbi. Yileso elula ukuhwebelana-off kwezobuchwepheshe. Processing Ukuhumusha liyinkimbinkimbi abazalwa. Better ukuzama ukulawula i-yinkimbinkimbi futhi ahlele / achaze ongakhetha njengoba okusemandleni akho, kuka ku- “fihla” kubo.
Uma ngikhuluma iqiniso, Kungijabulisa kakhulu nalezo kukho futhi uma abathintekayo abantu ekuhumusheni njalo besebenzisa Transposh ngendlela singabantwana, Ngingathanda ukuzithola elibalulekile ukuze umsebenzi bese Transposh kunzima ukusebenzisa ngaphandle kwabo. Ngicela uvule kubo kuze nabantu abaningi?
Not uzama inkani lapha, kodwa “uyigcine elula” ungomunye izinkinobho zami ashisayo. Uxolo wena siyishaye! 😉
kanjani ukuze wengeze Sitemap kule Mod?
Le patch musani ukusebenzela kimi. Lapho i ukulayisha Sitemap-core.php bese uchofoze kabusha Sitemap “XML Sitemap ugesi” uthi:
# Ekugcineni wokugcina azizange uqede! Mhlawumbe kungaba iphakamisa imemori noma isikhathi umkhawulo for PHP imibhalo. Funda ngaphezulu
# I last inkumbulo ukusetshenziswa ezaziwayo umbhalo kwaba 36MB, umkhawulo leseva wenu 256M.
# I last aziwayo ukukhishwa nesikhathi umbhalo kwaba 133.07 imizuzwana, umkhawulo leseva wenu 120 imizuzwana.
# I script wama ezungeze inombolo post 1716 (+/- 100)
Ngiyabona kuphela basikisela noma ukuphakamisa umkhawulo wesikhathi salokho isikripthi noma ukuthuthela version 4 laleso plugin
siyabonga ukwabelana lokhu, lapho kufanele mhlawumbe kube esibonakalayo kangcono ukuthi uyeza kwezinye version esizayo 🙂
Ingabe transposh iyahambisana Hypercache?
Ngikhetha besebenzisa Hypercache phezu super isilondolozi.
Hypercache has eziningi ongakhetha for invalidating cache.But Angazi kanjani ukuyisebenzisa for transposh.
Angikaze ihlolwe lokhu, kodwa ngicabanga ukuthi ingase asebenze, ukuntuleka invalidation kungase kwenze nezindaba reposting for ukuhumusha, kodwa zama it out, mileage yakho ngeke ifane
Kuzodingeka 2 imibuzo…
1) Ngithanda ngezinye izikhathi ukubhala engikubhalile in English, abese ukuhumusha kwabo ngesi French, futhi ngezinye izikhathi ku French bese ukuhumusha kwabo esiNgisini. Kungenzeka futhi kanjani?
2) Ngingathanda kube kuphela ukukwazi ukuhumusha engikubhalile futhi angathanda ukhetho hhayi ukuba avele emakhasini inthanethi. Nalapha futhi, kungenzeka, futhi kanjani?
1. Kumele usebenzise i-meta tp_language in okuthunyelwe kwakho
2. Just setha Ukuhumusha imvume admin, it uzovela emakhasini akho inthanethi kodwa hhayi abasebenzisi bakho
Ngicele nina izikhathi eziningi, kodwa akazange asithole izimpendulo. Ngisho, seniye basusa yonke imibono yami.
I ozifakile-plugin, config bese wengeza widget ngempumelelo. Nokho, lapho i I ulimi othize, it isiphambeko:
“Okuqukethwe Ukufaka ikhodi Iphutha
Ikhasi ozama ukubuka ongaboniswa ngoba isebenzisa i ifomu noma engavumelekile engasekelwa of zlib.”
Ungahlola indawo yami, futhi ngicela ungazise Isixazululo sakho.
Engiye ngazama kaningi kangaka wena ukuba mail, sicela uhlinzeke ukusebenza imeyili ikheli in imibono uma ufuna uthole izimpendulo ngezikhathi ezithile, Ngingathanda batuse ngibheka ifolda okuqukethwe kwakho spam ngezikhathi ezithile uma elinde ukuba noma yini ebaluleke, empeleni – Usanda impendulo lapha, gzip udaba, mhlawumbe setting ngenxa yokungabi site lakho noma plugin eziphikisanayo
Kimi kwakukuhle inkinga plugin “gzip zlib”. Zama ukuvimbela it ukubona uma uyayixazulula inkinga
Ngiyabonga Transposh kanye nezimpendulo Ilyo sika!
Angazi uma i sikwazi gzip zlib, Mhlawumbe ingxenye WP super isilondolozi noma isilondolozi total w3 ? Manje, kanjani ngikukhubaza it? Ngicela!
Enye umbuzo, Ngiye abafake lokhu plugin kwenye indawo, Kuye kube omuhle phambi. Nokho, kusuka izolo, iye uvele ikhasi elingenalutho lapho i I ulimi othize. Ngakho yini inkinga?
Ngicela ungisize! Siyabonga wonke guys nje kakhulu!
Awukwazi ngempela kukusize okuningi mayelana le gzip, lokhu unokuthile ukwenzani nge ukumisa eziphikisanayo thina abawazi.
Amakhasi blank kumele ixazululwe ngokwandisa umkhawulo yememori PHP.
Nini sithola update for 3.2.1?
Ngithanda wakho Translation-Plugin futhi bangathanda ukuyifaka ukuba kwami ​​entsha WP-Version
Well, okusebenza nge 3.2.1. Le sayithi zihamba 3.2.1, ukuqagela ngizokwenza ukushintsha readme.txt ngokushesha ngokwanele.
kulungile… Day.. nge isihloko sami (Mondeo – kusuka uhele-theme) okungukuthi akusebenzi. kuphela backend kuyokwenziwa lihunyushwe unomphela, kodwa indawo engaphambili ke does not ukusebenza 🙁
kulungile, yonke emuva… Manje ngikwenzile noma yimaphi.
Ngiyayithanda plugin yakho !!!
Sorry den Für Doppelpost…
Thokozani ukuzwa konke kuhamba kahle manje